को,रोनाकै कारण सकियो विरगञ्जको एक ब्यापारीक घराना ! आमा र भाई गु,माए लगत्तै मम,ताको पनि निधन – Satya Samachar
मुख्य पृष्ठ /समाचार/को,रोनाकै कारण सकियो विरगञ्जको एक ब्यापारीक घराना ! आमा र भाई गु,माए लगत्तै मम,ताको पनि निधन
वीरगञ्ज। कोरोनाकै कारण नेपालको ब्यापारीक घरानाका एक परिवारमा ३ जनाको निधन भएको छ । वीरगञ्जस्थित हिमाञ्चल केविनकी सञ्चालक ममता राजकर्णिकरको परिवारमा ३ जनाको निधन भएको हो । आमा र भाई गुमाएको केही दिनमै ममताको पनि विहिवार दिउसो निधन भएको छ । लामो समयदेखि काठमाडौँस्थित ग्राण्डी अस्पतालमा उपचाररत रहेकी राजकर्णिकरको विहिवार दिउँसो निधन भएको हो ।
कोरोना पुष्टि भएपछि उनको काठमाडौँस्थित ग्राण्डी अस्पतालको अति सघन कक्ष भित्र भेन्टिलेटरमा राखेर उपचार चलिरहेको थियो । वीरगञ्जस्थित क्रेच इन्टरनेसनल स्कुलकी सञ्चालक समेत रहेकी राजकर्णिकर केहि दिनअघि कोरोनामुक्त भएपनि स्वास्थ्यमा सुधार नआएको कारण उनलाई अस्पतालमै राखिएको थियो । उपचारको क्रममा बिहिबार दिउँसो अढाई बजे उनको निधन भएको परिवार निकट स्रोतले जनाएको छ ।
शुक्रबार काठमाडौँस्थित पशुपतिनाथ आर्यघाटमा उनके अन्त्येष्टि गरिएको छ । राजकर्णिकर वीरगञ्जको विभिन्न संघ संस्थामा समेत आबद्ध रहेकी थिइन । उनि उमन स्किल सेन्टर वीरगञ्जको संस्थापक सदस्य र सृजनशिल युवाहरुको संस्था संस्कृतीकी सल्लहाकार समेत रहकी थिइन । यसअघि केहि दिन अगाडी कोरोनाकै कारण उनका भाई एवम् युवा व्यवसायी विजय राजकर्णिकर र आमा केदार नानि राजकर्णिकरको निधन भएको थियो ।